site ha na 2020-12-02
Sophora japonica wepụ genistein flow chart & coa
Genistein bụ pystoestrogenic isoflavonoid dị na soybeans, pea pods, na mkpo ndị ọzọ. Ihe oriri mmadụ nke genistein, nke bụ isi dị ka glycosides, bụ 0 ka 0 mg / kg. Genistein dị n'ọtụtụ dị ukwuu na mgbakwunye nri. Genistein bụ carcinoge ...
Nnukwu ule nke atọ nke akụkọ luteolin, nchọpụta Atlas na Coa
isi ngwaahịa nke Shaanxi Green Bio-Engineering Co., ltd.
Anyị ụlọ ọrụ nwere elu zuru ezu mmepụta usoro, ike oru ike, ezi uche ụlọ ọrụ osisi layout, dị ọcha ma dozie gburugburu ebe obibi. Anyị ụlọ ọrụ na-onwem na a dịgasị iche iche nke elu gbasara nyocha instrumentation, na dum mmepụta usoro si ngwaọrụ ịchịkwa ikpeazụ ...
NMR, chaatị HPLC, akụkọ nyocha nke kaempferol
Sophora japonica wepụ kaempferol 98% Anyị bụ ndị ọkachamara na ndị a tụkwasịrị obi nke ndị na-emepụta ihe ọkụkụ dị na China. Maka inye ngwaahịa dị elu, amachibidoro anyị ịchịkwa usoro anyị. Ọ dị mfe ịnye Sophora japonica wepụ ngwaahịa na ọnụahịa dabara adaba n'ihi na ...
ọnụahịa ferulic acid na-abawanye
Iji ezigbo ahịa ： Ferulic acid ngwaọrụ mụbara 20 yuan kwa kilogram na-adịbeghị anya, ya mere na ngwaahịa na-eri na-abawanye karịa 20 yuan, N'ihi na anyị na-enwekarị mmasị ， Site esịtidem alo nke ụlọ ọrụ. Ọnụ ego nke ferulic acid rịrị elu $ US 3 kwa kilogram.http: //www.sxg ...
Nka na ụzụ nke ferulic acid
A na-eji acid Ferulic eme ihe n'ọtụtụ ebe na nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ ntecha. N'etiti itinye okwu nke ferulic acid na ụlọ ọrụ ịchọ mma, ndị ahịa nwere ihe dị elu chọrọ na agba na solubility. Shaanxi Green Bio-Engineering Co., Ltd. ka na-aga n'ihu ibuo ibu na nke a ...
ọzọ igwe onwem
Na August 2020, na iwu ndị ahịa na-aba ụba, Shaanxi Green Bio-engineering Co., Ltd., na ndabere nke akụrụngwa mbụ, nye ụlọ ọrụ mmepụta ụgbọ ala ọhụrụ abụọ, oven ụzọ anọ, mmejọ mmeghachi omume abụọ na otu nnukwu arụmọrụ mmiri mmiri chromatography. . Companylọ ọrụ anyị nwere ...
Ndụ nke ngwaahịa sitere na nzụlite na-aga n'ihu na teknụzụ
Na 2020, n'okpuru akwụkwọ mgbu coronavius, ka emetụta ọtụtụ ụlọ ọrụ. N'okpuru mmetụta nke nnukwu gburugburu ebe a, ahịa nke Shaanxi green Bio- Engineering Co. Ltd. nwere ọghọm. Ọ bụghị na mberede kama nsonaazụ nke ndị ọrụ R & D na ụlọ ọrụ anyị ...
Glycosides sitere na ihe ọkụkụ
Mejupụtara shuga na ihe na-abụghị shuga. Ihe jikọrọ glycosides dị na akụkụ shuga. Lydị aglycones dị iche iche na-arụ ọrụ dịgasị iche ma nwee ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ dijitalụ nwere glycosides cardiac, yana ginseng nwere ginsenosides maka qi, shengjin ...
Osisi wepụ ngwaahịa mmepe
Ihe data a gosiri na n’ọkara mbụ nke afọ 2014, e nwere ụlọ ọrụ 1074 na-ebupụ ngwa ahịa ewepụtara ihe na mba m, ntakịrị mmụba ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ nke ndị na-ebupụ ahịa na otu oge na 2013. N’etiti ha, ọnụego mbupụ nke ụlọ ọrụ nkeonwe gụrụ. maka 50.4%, f ...
Osisi wepụ ahịa ahịa na ọchịchọ
E nwere ọtụtụ ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche. Ihe a na-enwetara ma na-achọ ngwaahịa ndị a na-agbanwe mgbe niile na afọ na ihe dị iche iche n'ahịa, na enweghị nnabata n'etiti ọkọnọ na mkpa na-apụta site n'oge ruo n'oge. ① Nweta ngwaahịa na-emetụta Dị ka ihe ọkụkụ nke osisi wepụ m ...